कथा – अन्त्यमा मैले छोडिदिंए उस्लाई | News Dabali
कथा – अन्त्यमा मैले छोडिदिंए उस्लाई
November 7, 2014 | 5:31 pm
लेख्न के नै बाँकी रह्यो र अब ? अन्तिम बिन्दु नै शुरुवातको गजबार बनेपछि ! तर हैन म अझै सानो एउटा छिद्र देख्दैछु जहाँबाट म यो सुन्दर संसार चियाउन सक्छु भलै म त्यो घामको न्यानो रापमा सेकिनबाट बञ्चित हुँला तर म त्यो उज्यालो हेर्न र महशुस गर्न सक्छु अध्याँरो बस्तीमा बसेर पनि । हो यहि प्रयाप्त हुनेछ किनकी एउटा शरीरको लागि तीन बित्ता जमिन भए पुग्छ पुरै ब्रहमाण्ड चाहिदैंन । यहि सिदान्तमा अडिएर जीवन निर्वाह गर्ने हो भने पक्कै पनि जीवनले आफ्नो सार भेट्नेछ हैन भने कुनै दिन म पनि सडक र गल्ली गल्ली घुमिहिड्नेछु ‘पागल’ को उपनाम भिरेर ।
“किरण आजदेखि हामी कहिल्यै भेट्ने छैनौ । चाहेर नचाहेर मानिसको जीवनमा अनगिन्ती नरमाईला क्षणहरु आउँछन् । त्यिनीहरु मध्ये यो पनि एक हो भन्ने मैले सोचेकी छु । त्यसैले एउटा नमिठो सपना ठानेर बिर्सिदैंछु । हाम्रो यात्रा आज अहिले यहिसम्मको लागि रहेछ ।यहिबाट हाम्रो यात्रा अलग धारमा बहनेछ ।”
एकैछिन त यो मन्ले मलाई कस्तो विचलित गरायो । फर्किएर त्यो आँशुपुछिदे भन्दै थियो । टक्क अडिएकी पनि हुँ त्यो रेस्टुराँको ढोकामा पुग्दा । एकैछिन् मेरो मन र मेरो विचारको पौठेंजोरी नै पर्‍यो । कति कष्ट भएथ्यो ” कसैको जीवन तहस नहस पार्न हुन्न तैंले। जे गरिस ठिकै गरिस् ।” भनेर मन्लाई थुम्थुम्याउन । निकै बेर अटेर गरिरहेथ्यो । तर मेरो मन् हो मैले मनाईछाडें ।
वास्तवमा त्यो दिन मैले रुकुलाई बसपार्कमा नभेटेकी भएं अझै पनि दुखाईरहन्थें होला । निकै लामो प्रतिक्षा पश्चात उनले त्यस दिन मलाई फेला पारेकी रहिछिन् । मलाई भेट्ने बितिक्कै उनले भनेकी थिइन् ” हजुर नै हो शालिनी ? मैले कति दिन भो हजुरलाई भेट्न खोजेकी । मेरो कुरालाई अन्यथा नलिदिनुहोला । म किरणको पत्नी हुँ । एक महिना भो काठमाण्डौं आएकी । अहिले म उहाँसंगै यहि बस्दै आएकी छु । मलाई थाहा छ हजुर किरणसंग प्रेम गर्नुहुन्छ र किरण पनि हजुरलाई माया गर्नुहुन्छ । यसैको कारण होला किरण मलाई रुचाउनुहुन्न। मेरो छाँया पनि मन् पराउनुहुन्न । त्यसो हो भने म कहाँ जाउँ ? उहाँले त ३ वर्ष भैसक्यो मलाई गाउँमै छाडेर आउनुभएको तर यसपाली घरका सबैले संगै बस्न सल्लाह दिएपछि आएकी हुँ । यहाँ आएपछि थाहा भयो उहाँ हजुरलाई मन् पराउनुहुन्छ । मलाई हेर्नुस् त । मेरो निरश जीवन हेर्नुस त । के मेरो संसार यहि हो ? यसैमा म बाँचु या मरुँ ? निर्णय तपाँई दिनुस ।” म अवाक भएथें त्यस दिन त्यसै क्षण जतिखेर मैले प्रेम गरेको किरण भन्ने व्यक्ती विवाहित हो भन्ने जान्दैथिएं । आफू उभिएको धरातल भासिएझै लागेको थियो । म म नभएर कुनै जडवत मुर्ती भएकी थिएं। टाउको भननन भएको थियो। झण्डै पुरै ब्रम्हाण्ड घुमिरहेझै लागिरहेथ्यो ।
केहि बेर पछि मैले आफूलाई सम्हाले, सम्हालिनु आवश्यक पनि थियो र भनें “सायद मैले दुखाएं । तपाँई जानुस । अब उपरान्त तपाँईले मसंग यस्तो गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछैन ।”
तब लाग्छ वास्तवमै उनि पनि म जस्तै नारी हुन् । उसंग पनि मन् छ ,उमङ्ग छ, आफूलाई कसैले आघात पार्दा दुख्छ भने पक्कै पनि उसलाई पनि दुख्छ ।हामी नारीले नारी पीडा बोध नगरे कसले गर्छ ? पक्कै पनि कुनै पुरुषले गर्दैन । यदि गर्दो हो त किरणले “म अविवाहित हुँ ।” भनेर किन ढाँट्थ्यो ? किन मलाई आजसम्म भ्रममा राख्ने दुश्प्रयास गर्थ्यो ? उनिहरु त नारीलाई कुनै सुगन्धित फूल झै टिप्छन्, सुँघ्छन् अनि फाल्छन् । यस अर्थमा मैले यो निर्णय गरें कि त्यो पुरुषवादी सोचले ग्रस्त मान्छे जस्ले आफ्नो श्रीमती र मलाई उहि सुगन्धित फूल झै टिप्न,सुँघ्न र फाल्न खोज्यो आज उसैलाई म फाल्छु, कुल्चिन्छु र रौंदछु मेरो पैताला मुनि । हो यहि विचारको पहाड बोकेर म ढुङ्गा जस्ती भएर किरणलाई भर्खरै भेटेर आफ्नो कठोर निर्णय सुनाएर आएकी छु । हठात मन् लिएर किरण म निस्केको ढोकातिर हेरेर अपमान बोध गर्दै थियो सायद जीवनमा पहिलोपटक सजाय भोग्दै थियो ।
सुनगाभाको नेपाली कथा संग्रह निर्णय बाट
देवकोटाको ‘चम्पा’उपन्यास हिन्दीमा आउने
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘चम्पा’उपन्यासलाई हिन्दी भाषामा अनुवाद गरी प्रकाशन गर्ने भएको छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठान साहित्य (अनुवाद) विभाग प्रमुख…
धरणीधर पुरस्कार जयबहादुरलाई
नेपाली भाषा एवम् साहित्यको उत्थानका लागि विगत तीन दशकदेखि सक्रिय धरणीधर पुरस्कार प्रतिष्ठानले २०७१ सालको धरणीधर पुरस्कारबाट कवि जयबहादुर राई…
साहित्य सन्ध्याको ३४३ औँ कार्यक्रमअन्तर्गत शनिबारको कविगोष्ठीमा कविहरुले ‘संविधान बनाऊ’ भन्ने दबाबमूलक कविता पाठ गरे । गोष्ठीमा रामप्रसाद प्रदीप, पूर्ण…
गजल – त्यो गाउने सँग बिहे गर्छु